Nhoroondo yeHotera: Shelton Hotel New York Inonongedza Nzira Yemangwana
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resorts » Nhoroondo yeHotera: Shelton Hotel New York Inonongedza Nzira Yemangwana
Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • ushanyi • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Hotera mu Shelton
Mashoma skyscrapers aiyemurwa se1924 Shelton Hotel kuLexington Avenue uye 49th Street, yava kunzi New York Marriott East Side.
Vatsoropodzi vakabvumirana kuti inoyevedza nhurikidzwa makumi matatu neshanu façade uye chisina kujairika dhizaini dhizaini yakaratidza nzira yeramangwana kune skyscraper.
Iyo Shelton yakavakwa neyekugadzira chinzvimbo chinogadzira James T. Lee, aive zvekare nebasa reimba mbiri dzemhando yepamusoro: 998 Fifth Avenue ya1912 uye 740 Park Avenue ya1930.
Aive sekuru vaJacqueline Kennedy Onassis, akaberekwa Jacqueline Lee Bouvier.
Chiono chaVaLee chaive chiuru nemazana maviri nemazana maviri emakamuri mahotera hotera ine kirabhu-mhando maitiro: dziva rekushambira, matare e squash, makamuri emabhiridha, solarium uye infirmary. Nyika yeNew York muna 1,200 yakati Shelton ndiyo ichave chivakwa chakareba kwazvo pasi rose.
Mugadziri, Arthur Loomis Harmon, akafukidza huremo nezvidhinha zvisina kuenzana zveyero, zvakasungwa kunge mazana emakore, uye akadhirowa kubva kuRomanesque, Byzantine, Christian yekutanga, Lombard uye mamwe masitayera. Asi vatsoropodzi vakanyanya kufadzwa kuti yakayeuka "hapana chaiyo dhizaini yekuvaka yezvakaitika," sezvakaiswa nemunyori Hugh Ferriss muChristian Science Monitor muna 1923.
Iyo Shelton yaive imwe yezvivakwa zvekutanga kutora fomu yayo kubva kumutemo wezvekugadza we1916 waida kudzokororwa kune dzimwe nzvimbo dzakakwirira kuti uone mwenje nemhepo mumugwagwa. Izvo zvakaita kuti ive yakatosiyana kubva kumahotera marefu emabhokisi akagadzirwa pamberi pekuchinja kwenzvimbo, se1919 Hotel Pennsylvania, yakatarisana nePennsylvania Station.
"Chivako chine mbiri, chinotora mweya," akadaro Helen Bullitt Lowry naWilliam Carter Halbert muThe New York Times muna 1924. Mutsoropodzi Lewis Mumford, mutsika nemagariro nekurumbidza, akaidaidza kuti "inovhuvhuta, inofamba, yakanyarara, seZeppelin iri pasi denga rakachena ”mumagazini yeCommonweal muna 1926.
Dhizaini yekuona ine muganho wayo, zvisinei, uye zvemukati zvaVaHarmon zvinoita kunge zvaive zvakati siyanei kubva kune mamwe mahotera mahombe epanguva yacho: makuru akavakirwa dzimba dzekutandarira, imba yekudyira ine siringi ine matanda uye nzira dzakareba dzakakomberedzwa. Chetatu chemakamuri vaive vaine mabhati akagovana, ayo anofanira kunge akaunza kunetsekana mukupera kwa1924, apo Shelton akadzosera mutemo wayo wevarume-chete. Iyo yepamusoro gallery yakamhanya ichitenderedza yepasi padziva, iyo yaive yakashongedzwa netepychromed tile.
Kubva muna 1925 kusvika 1929, Georgia O'Keeffe aigara pasi pechimakumi matatu pasi peShelton Hotel nemurume wake, mutori wemifananidzo Alfred Stieglitz. Nezvinobvira kusarudzika kweIhotera Chelsea, zvakaoma kufunga nezveimwe New York City hotera iyo yakave nemhedzisiro yakadai pamuti, kunyanya hotera iwe yaungangodaro usina kumbonzwa nezvayo.
Kuvakira pamusoro peLexington Avenue pakati pemigwagwa yemakumi mana nenomwe, 48-nhurikidzwa, makamuri ane chiuru nemazana maviri eShelton Hotel yakarumbidzwa seyakareba kwazvo pasi rose payakavhurwa muna 49. Yakanga isiri yakareba chete, yaive iri nyore - hotera yakanaka yekugara yevarume vane mukoto we bowling, matafura emabhiridha, matare e squash, shopu yekugera nedziva rekushambira.
Izvo zvisina kumbobvira zvikave nekupokana yaive chivakwa kukosha kwekuvaka. Nenhurikidzwa mbiri-yemarara yematombo uye zvigadziriso zvitatu zvezvidhinha zvichikwira kune shongwe yepakati, iyo Shelton yaiputsa pasi. Vatsoropodzi vakafunga ichi chivakwa chekutanga kuti vabudirire mumatanho ekugadza 1916 zvakatemwa zvipingaidzo zvekuchengetedza skyscrapers kubva pakuva hulking eyesores.
Iyo Empire State Kuvaka ingori imwe yezvivakwa izvo Shelton yakafurira. Pakazosvika gore ra1977, New York Times muongorori wezvekuvaka Ada Louse Huxtable akazivisa kuti hotera iyi "inzvimbo yepamusoro muNew York."
O'Keeffe angadai asina kukumbira imwe studio inowirirana. Kubva paimba yake yemhepo, ainakidzwa asina kukamurwa, ziso reshiri kuona rwizi uye chirimwa cheguta chiri kukura chevanhu vakareba. SaCharles Demuth, Charles Sheeler nevamwe vanyori venguva yake, O'Keeffe aifadzwa nezvivakwa zvepamusoro sechiratidzo chemazuvano emadhorobha, musimboti wePrecisionism, iyo Post-World War I yemaitiro ehunyanzvi akapemberera nyika yeAmerica ine simba nyowani yemabhiriji. , mafekitori uye skyscrapers.
Akaverengerwa mukati make Shelton perch, O'Keeffe akagadzira angangoita makumi maviri nemashanu ekupenda uye mifananidzo yemasikiriti nemaguta macape. Pakati peanonyanya kuzivikanwa pane "Radiator Chivakwa - Husiku, New York," kupemberera kune hunyanzvi kweiyo skyscraper mystique - uye inoyevedza yechitema negoridhe American Radiator Building yava kunzi Bryant Park Hotel.
Arthur Loomis Harmon, mugadziri weShelton, akaenderera mberi nekubatsira kugadzira iyo State State Building. (Akagadzirawo Allerton House, inoshamisa 1916 New York yekugara hotera).
Asi mukurumbira waShelton akapfura mudenga mushure mekushanyira padziva rekushambira repasi mu1926 nemutambi anotiza Harry Houdini. Yakavharirwa mubhokisi risingafungidzirwe mhepo, bhokisi rakafanana nebhokisi (kunyangwe rimwe rakagadzirwa nefoni kana pakaitika emergency), Houdini akadzikiswa mudziva raakange akarara akanyudzwa kweawa nehafu. Akabuda panguva, akaneta asi ari mupenyu. "Chero ani anogona kuzviita," akaudza The New York Times.
Kunyangwe paine nhoroondo yakajeka uye yakasarudzika dhizaini, Iyo Shelton, sezvazviri pamwe neese anenge mahotera akwegura akadonha kubva mukufarirwa. Paive nevane gumi chete venguva yakazara vagari mukati ma11s. Muna 1970 yakava iyo Halloran yeyakavakirwa chivakwa. Akashandira Stephen B. Jacobs kuti agadzirisezve zvemukati, zvichideredza huwandu hwemakamuri kusvika ku1978.
Na 2007 yaive yaMorgan Stanley uyo akapa oparesheni kuMarriott Company.
Iyo yekuvaka uye yeinjiniya yakasimba Superstructures ine mushandirapamwe mukuru wekugadzirisa kwekunze kuri kuitwa. Richard Moses, mugadziri anoona nezve chirongwa ichi, anoti ruzivo rwakakwirira rwaVaHarmon, kusanganisira misoro, mamask, griffins uye gargoyles, zvakajairika, kunyangwe akati wandei anga akarohwa zvakanyanya nezvinhu zvakatsiviwa.
VaMoses vakati Mr. Mhedzisiro yacho, isinganzwisisike kumusoro kumusoro, inoonekwa padanho repasi.
Iyo yepakutanga yemukati meiyo 1924 hotera yakadzika kuita zvidimbu, seye stair horo kurudyi kwenzvimbo huru yekutandarira. Matare e squash aenda; munzvimbo yavo pane kamuri yekurovedza muviri pane iyo 35th pasi ine inoshamisa maonero kwese kwese kutenderera. Ihotera yakatumidza makamuri mushure meArthur Loomis Harmon, Alfred Stieglitz naGeorgia O'Keeffe.